လကုန်ရင် Nano ရဲ့ ဘယ်လို Super Agent တွေ ထွက်ပေါ်လာမလဲ? Nano Brush နဲ့ Spray ရဲ့ Monthly Bonus Cash Back နဲ့အတူ Super Agent တွေကို ကြိုဆိုလျက်ပါ ? Nano Spray တစ်ခု ၁၇၀၀၀ ကျပ် Nano Brush တစ်ခု 12000 ကျပ်
Nano Spray ရှိရုံနဲ့ အရေပြားရေဓာတ်စစ်ဆေးမှုကို စမ်းသပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင် သိပါသလား? Nano Spray မှာ အရေပြားရေဓာတ်စစ်ဆေးမှု ကိရိယာပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေခြောက်သွေ့နေလားဆိုတာ ချက်ချင်းစမ်းသပ် သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အရေပြားက ရေဓာတ် ၃၀% မှ ၆၀% ကြားမှာ ရှိရပါမယ်။ ၃၀% ထပ်နည်းနေရင်တော့ Nano Spray နဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုပါတယ်နော် ☺️ Nano Spray တစ်ခု ၁၇၀၀၀ ကျပ်
Nano Brush ကို ကြာရှည် အသုံးပြုနိုင်အောင် ဒီလိုလေး သန့်စင်ပြီး ထိန်းသိမ်းပေးပါနော် ? ? အသုံးပြုပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာများ မကျန်နေအောင် ရေဖြင့်ဆေးကြောပြီး ခြောက်သွေ့စွာ ထားပါ။ ? စိုထိုင်းသော နေရာတွင် မသိမ်းထားပါနှင့်။ ပန်းကန်ဆေးစက်၊ မိုက်ခရိုဝေ့(ဖ်)အာဗန်ထဲတွင် ထည့်သွင်း သန့်စင်ပိုးသတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ? ရေကလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မှ သန့်စင်ဆေးကြောခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။ ? အရက်ပျံလောင်စာဆီ၊ စားသုံးဆီ စတာတွေနဲ့ သန့်စင်ပေးလို့မရပါဘူး။ ဆီလီကွန် Brush များ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ? စက်ကို ၃ လ နှင့်အထက် အသုံးမပြုဘဲ ထားမည်ဆိုပါက ဘက်ထရီအပြည့်သွင်းပြီးမှသာ သိမ်းဆည်းထားပါ။ ဒါမှ ဘက်ထရီပျက်စီးခြင်း မဖြစ်မှာပေါ့ ? ❤️ Nano Brush တစ်ခု 12000 ကျပ် ❤️
မျက်နှာမှာ ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေကြောင့် ချွေးပေါက်တွေ ပိတ်နေပြီလား? ဒါဆို Deep Cleansing ပြုလုပ်ပေးဖို့ Nano Brush ကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်နေပြီနော်။ Nano Brush က တုန်ခါမှုဖြင့် သန့်စင်ပေးခြင်းကြောင့် အရေပြားအတွင်းဆုံး အလွှာ အထိ ရောက်စွာ သန့်စင်ပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ Nano Brush တစ်ခု 12000 ကျပ်
Nano Brush ကို Food Grade Silicon နဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ချွတ်မှုကို မဖြစ်ပေစေပဲ ထိရောက်တဲ့ သန့်စင်မှုကို ‌ပြုလုပ်ပေးပါတယ်. ဘက်တီးရီးယားလုံး၀ ‌ပေါက်ပွားနိုင်ခြင်းမရှိတာ‌ကြောင့် ၀က်ခြံပေါက်လွယ်တဲ့ အသားအရေအတွက်လည်း သင့်တော်ပါတယ်. ဆဲလ်အသစ်ဖြစ်‌‌ပေခြင်းကို အား‌ပေးပြီး အရေပြားအတွင်း ‌သွေးလည်ပတ်မှုကို ‌ကောင်းမွန်စေတာ‌ကြောင့် နုပျိုမှုကို အထိရောက်ဆုံး ထိန်းသိမ်း‌ပေးပါတယ်. Nano Brush တစ်ခု ၁၂၀၀၀ ကျပ်.
ထိုင်းမှိုင်း‌နေတဲ့ အရေပြားကို ရာသက်ပန် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ. Nano Brush ကို သုံးပြီး သစ်လွင် ‌တောက်ပတဲ့ အရေပြားအသစ်ကို ရယူလိုက်ရအောင် . . .